Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noVusi Zondi, i-social cohesion advocate emNyangweni wezobuCiko namaSiko, umphathi wezinhlelo nowayewumdidiyeli wezinhlelo kwiGagasi FM - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Ngiqale ngo-2006, ngayivula eFNB.
Wukuyiphatha ngokucophelela, ngingathengi izinto ezingenasidingo ukuze ngolunye usuku uma ngificwa amathonsi abanzi ngingazisoli ngokusebenzisa imali budlabha.
Ukusebenza ngokusemthethweni ngiqashwe mhla ka-13 Mashi ngo-2006, ngiqashwa wumsakazo iGagasi FM. Umholo wami wokuqala kwakungu-R6 500.
Umholo wami wokuqala ngawunika abazali bami, kwaba yibona abangiphayo. Lokho ngakwenza ngoba ngikholwa wukuthi izibuziso zami zilele kubazali.
Kuningi kakhulu engiziqhenya ngakho engake ngakwenza, kungashona ilanga uma ngingabala. Kodwa engicabanga ukuthi (okuhamba phambili) wukuvusa umuzi wasekhaya.
Angiyena umuntu obudedengu, ngiqikelela ngokweqile, ngakho alikho iphutha elithinta imali esengake ngalenza.
Ngenxa yokuqikelela nokukhulela emakhaya izinto ezisheshayo bengihlala ngizesaba, ngakho angikaze ngizibandakanye namabhanoyi.
Iseleluko esimqoka engasithola ngemali wukuthi yenza okuhle njalo ukuze uMdali namathongo baqhubeke bakubusise ngemali.
Kuningi kakhulu okusemqondweni nasenhlizweni yami. Ngiwumuntu onomndeni omkhulu, ngakho ngingaqinisekisa ukuthi (ngibabela) kwenginako, bese ngibekela abantwana bami bangahlupheki uma (sengishonile).
Izinsuku esiphila kuzona zinzima kakhulu, zidinga imali ngayo yonke indlela, ngakho kumqoka ukuphatha imali ngobunono.